कालापानीले जुराएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय - Ujyaalo Nepal
कालापानीले जुराएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय
By ujyaalo	 On १५ मंसिर २०७६, आईतवार ०६:४५ 76
छिमेकीको दुःखमा आफ्नो खुशी खोज्नु तथा छिमेकीलाई कमजोर बनाएर मात्र आफू शक्तिशाली बन्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नयाँ दिल्लीले अवलम्बन गर्दै आइरहेको पुरानै मान्यता हो भन्ने कुरामा धेरै बहसको जरुरी छैन ।
श्रीलङ्काको जातीय विग्रह र युद्धका सन्दर्भमा एउटा जर्मन पत्रिका अलजमाइनेले ८० को दशकमा आफ्नो सम्पादकीयमा सटिक टिप्पणी गरेको थियो । छिमेकीलाई कमजोर बनाएर आफू बन्न खोज्नु दिल्लीको चिरपरिचित रणनीति हो ।
सिक्किमको भारतमा विलय, पाकिस्तानको विभाजन भई बंगलादेशको निर्माणमा भारतको भूमिका र श्रीलङ्कामा जातीय झगडा चर्काउन भारतले खेलेको भूमिकाको पृष्ठभूमिमा जर्मन अखबारको उक्त टिप्पणी आएको थियो ।
छिमेकीलाई अस्थिर बनाएर मात्र भारतीय राज्य स्थिर र शक्तिशाली बन्न सक्छ भन्ने बेलायती शासनकालीन मान्यताबाट अझै पनि दिल्लीको सत्तावृत्तमा बसेको वर्ग यताउता भएको देखिन्न । फुटाऊ, कमजोर बनाऊ, अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर अनि आफ्नो सत्ता सुदृढ गर । एक सय ८० वर्षसम्म भारत र त्यहाँका जनतामाथि बेलायतको कब्जा सैन्य शक्तिका अलावा उपरोक्त आधारहरुमा सम्भव भएको थियो ।
कालापानी लगायतको भूभागलाई भारतभित्र राखेर हालै सार्वजनिक गरिएको भारतको राजनीतिक मानचित्र उपरोक्त मान्यताकै निरन्तरताका रुपमा आएको देखिन्छ । नेपालको सीमा सुगौली सन्धिबाट नै निर्धारण भएको हो । सन्धिमा नेपालका राजाले काली नदीभन्दा पश्चिम र मेची नदीभन्दा पूर्वका सबै भूभागहरु परित्याग गर्नेछन् भन्ने स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरिएको छ ।
महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले त्यसभन्दा पूर्वका कालापानीलगायतका सबै भूभागहरु र गाउँहरु नेपाली भूमिभित्र पर्दछन् । यी कुरा बुझ्न कुनै घागडान सीमाविज्ञ हुनु पर्दैन, न त कूटनीतिकै खेलाडी हुन जरुरी छ । सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको सीमा पूर्वमा टिष्टा नदीसम्म र पश्चिममा सतलज नदीसम्म रहेको थियो । सुगौली सन्धिपछि नै नेपालका एकतिहाई भूभाग गुम्न पुगेको हो ।
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्शाको सन्दर्भमा एउटा प्रश्न विचारणीय छ । छ दशकदेखि विवादित भूभागलाई भारतले यतिखेर नै आफ्नो नक्शामा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता किन ठान्यो ? चीनका राष्ट्रपतिको सफल भ्रमण नेपालमा भएको छ । नेपाललाई भूजडित बनाउन सहयोग गर्ने बचनबद्धता चीनको सर्वोच्च नेतृत्वबाट व्यक्त भएको छ ।
यतिखेर नै जब देशमा बामपन्थीहरुको दुईतिहाई सरकार जनता र राष्ट्रको पक्षमा केही ऐतिहासिक कामहरु गर्न प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको देखिन्छ, नेपाली कांग्रेसलाई आफूमैत्री ठान्दै आएको भारतले विगतमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका सरकारको पालामा यो नक्शा किन सार्वजनिक गरेन ? यो एउटा महत्वपूर्ण मननयोग्य प्रश्न हो ।
नेपाली जनता राष्ट्रियताको मामिलामा अत्यन्त संवेदनशील छन् । यो अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो । विगतमा भएका केही निर्वाचनहरुमा कांग्रेसले व्यहोर्नु परेको लज्जास्पद पराजयले यो देखाउँछ कि नेपाली जनताले त्यस्तो दललाई सरकारमा रहेको देख्न चाहेनन्, जो दिल्लीका सामु झुक्दछन् र नेपालका विरुद्ध सन्धि–सम्झौताहरु गर्ने गर्दछ ।
विगतको यो पृष्ठभूमिलाई हेर्दा कहीं यो मुद्दालाई अहिलेको बामपन्थी सरकारविरुद्ध जनआक्रोश पैदा गर्न र अन्ततः सरकारलाई असफल सावित गर्दै आगामी निर्वाचनमा भारतपरस्त शक्तिलाई सत्तामा ल्याउने कसरतको आरम्भ त होइन ? शङ्का गर्नका लागि प्रशस्त ठाउँ छ ।
नेपाल र भारतबीच कालापानीलगायत दर्जनौं स्थानहरुमा रहेका सीमा विवादहरु अनेकौं दशक बितिसक्दा पनि समाधान हुन नसकेका मात्र होइनन्, झन् पछि झन् बल्झिंदै गएका छन् । एकातिर भारतीय शासक वर्गको आफू शक्तिशाली छु, जे गरे पनि कसैले चुनौति दिन सक्दैन भन्ने दम्भले यसमा काम गरेको छ भने अर्कोतिर यसमा अत्यन्त संकीर्णतासमेत रहेको छ । यसका साथै यो कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ कि नेपालका आजसम्मका कुनै पनि सरकारहरु सीमा विवाद समाधान गर्नेतिर गम्भीर भएर लागेको देखिन्न ।
हालै भारतले आफ्नो नक्सामा नेपालको भूभाग सामेल गरेपछि यसले जुन नयाँ मोड लिएको छ, त्यो अत्यन्त गम्भीर छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा भारतको पराजय भएपछि पछि हट्दै गरेको भारतीय सेनालाई केही समयका लागि त्यहाँ क्याम्प राखेर बस्न तत्कालीन नेपालको सरकारले अनुमति दिएको थियो । कतिपयले राजा महेन्द्रले ०१७ सालको फौजी कूको समर्थनको बदलामा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनालाई अस्थायी रुपमा बस्ने अनुमति दिएको भनेर पनि भन्ने गरेका छन् ।
तर, यहाँ पनि यो त्यत्तिकै मननीय छ कि राजा महेन्द्र र उनका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टकै अगुवाइमा भारतले नेपालको चीनसँगको सीमा रहेका भारतीय सैन्य पोस्टहरु हटाउन लगाएर ऐतिहासिक महत्वको कार्यभार पूरा गर्न सफल भएका थिए ।
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न महेन्द्रले चालेका यो र यस्तै अन्य कदमहरुको पृष्ठभूमिमा उनले कालापानीलाई मोलतोलको विषय बनाएको भन्दै उनीमाथि लगाइने गरिएका आरोप तथ्यपरक देखिन्न । यस टिप्पणीको सुरुमै भनेजस्तै यो दिल्लीको बलमिच्याइँ र छिमेकीलाई कमजोर र अस्थिर बनाउने रणनीति थियो भन्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानु पर्ने आग्रह भारतलाई गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो पार्टीका तर्फबाट यसबारे विरोध दर्ज गरेका छन् ।
राप्रपालगायतका पार्टीहरु पनि यो राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट भएर देखापरेका छन् । यतिखेर मुलुकमा एउटा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता देखापरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । आशा गरौं सरकारबाट राजनैतिक र कूटनैतिक तहमा प्रतिवाद गर्दै यो समस्याको छिट्टै समाधान आउने छ ।
भारत यदि वास्तवमा महाशक्ति राष्ट्रहरुको दाँजोमा पुगेर विश्वको नेतृत्व गर्ने चाहना राख्छ भने उसले छिमेकीहरुमाथि बलमिच्याइँ तत्काल रोक्नु पर्दछ । काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भूभागमा भएका प्रदर्शनहरु ‘इण्डिया गो व्याक’ का नाराहरु अकारण लागेका होइनन् ।
सूचनासञ्चारको आजको युगमा यी नाराहरुको गुञ्जन विश्वभरि रहेका करोडौं नेपालीहरुबीच सेकेण्डभित्रै पुग्दछ । त्यो गुञ्जन भारतीय सेनामा भर्ति भएका गोर्खालीहरुमा पनि सेकेण्डमै पुग्दछ । जनसमुदायको स्वस्फूर्त आवाज भोलि चिनगारी हुँदै ज्वाला बन्न सक्छ भन्ने कुरा काठमाडौं र दिल्लीले जति छिटो बुझ्यो त्यति राम्रो हुन्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७६, आईतवार ०६:४५
भारतले फूटाउन खोज्यो, उनले जुटाउन खोजिनःयांछी तिमी राजदूत होईनौ साक्षात देवी हौ
चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश, यस्तो थियो नेपथ्यको घुस प्रकरण